ပင်မစာမျက်နှာ / applications ကို / Induction Drum အခြောက်ခံခြင်း။ / လျှပ်စစ်သံလိုက် induction အပူဒရမ်အခြောက်ခံစက်
အမျိုးအစား: Induction Drum အခြောက်ခံခြင်း။ Tags: induction အပူဒရမ်ခြောက်စက်ကိုဝယ်ပါ။, electromagetic rotary drum လေမှုတ်စက်, လျှပ်စစ်သံလိုက် induction အပူဒရမ်အခြောက်ခံစက်, induction ခြောက်သွေ့, induction အခြောက်ခံအပူပေးစက်, induction အပူဒရမ်ခြောက်စက်, induction အပူဒရမ်အခြောက်ခံစက်စျေးနှုန်း, induction အပူအခြောက်ခံစက်, induction အပူအခြောက်ခံကော်ဖီ, induction အပူအခြောက်ခံအစားအစာ, induction အပူအခြောက်ခံစပါး, induction အပူအခြောက်ခံအခွံမာသီး, induction အပူဒရမ်အခြောက်ခံစက်, induction rotary drum လေမှုတ်စက်
Electromagnetic Induction Heating Drum Drum
electromagnetic induction အပူ ဒရမ်အခြောက်ခံစက်သည် အစားအစာ၊ ကော်ဖီ၊ ပဲပိစပ်၊ အစေ့အဆန်များ၊ အခွံမာသီးများ၊ မြေပဲ၊ ဆီ၊ အခြောက်ခံပစ္စည်းများနှင့် အခြားသော စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဘေးထွက်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် အစားအစာများကို အခြောက်ခံရန်အတွက် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည့် စက်ကိရိယာတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ရိုးရာဒရမ်အမျိုးအစား ဒယ်အိုးများ၏ အပူပေးကိရိယာများသည် အများအားဖြင့် ကျောက်မီးသွေးမီးဖိုများ၊ အငွေ့ပြန်သည့်မီးဖိုများ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်အပူပေးသည့်ကိရိယာများဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ အပူပေးကိရိယာသုံးမျိုးသည် သွယ်ဝိုက်အပူပေးနည်းများဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ အပူကို ဒယ်ထဲသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည့်နည်းဖြင့် အပူလွှဲပြောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။
ရိုးရာဒရမ်ကြော်ဒယ်များတွင် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ် နည်းပါးခြင်းနှင့် စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု နည်းပါးခြင်း ပြဿနာများကြောင့် ဖြစ်သည်။ induction အပူဒရမ်အခြောက်ခံစက်များ စျေးကွက်တွင်ပေါ်လာသည်, ဆိုလိုသည်မှာ, ဒရမ်ခြောက်စက်ကိုလျှပ်စစ်သံလိုက် induction အပူ၏နိယာမအားဖြင့်အပူပေးသည်။ ၎င်း၏ လုပ်ဆောင်မှု နိယာမမှာ- ဒရမ်ခြောက်စက် ၏ အပြင်ဘက်တွင် လျှပ်စစ်သံလိုက် ကွိုင်များ အများအပြား ရှိပြီး လျှပ်စစ်သံလိုက် ကွိုင် အစုံတို့သည် လျှပ်စီးကြောင်းကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက် သမရိုးကျ သံလိုက်စက်ကွင်းများ ထုတ်ပေးသည်။ ဒရမ်အခြောက်ခံစက်သည် သမရိုးကျသံလိုက်စက်ကွင်းအတွင်းရှိ သံလိုက်စက်ကွင်းလိုင်းများကို ဖြတ်တောက်ခြင်းအား လုပ်ဆောင်ပေးသောကြောင့် ဒရမ်ခြောက်စက်အတွင်းတွင် လျှပ်စီးကြောင်းတစ်ခု ထုတ်ပေးပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဒယ်ဒီထဲတွင် အက်တမ်များနှင့် တိုက်မိကာ အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ပွတ်တိုက်ပေးသော eddy လျှပ်စီးကြောင်းသည် အပူအတွက် Joule ကို ထုတ်ပေးသည်။ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဒရမ်ခြောက်စက်၏ အပူပေးရင်းမြစ်မှာ ဒရမ်ခြောက်စက်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ၎င်းသည် ကျောက်မီးသွေးမီးဖိုများ၊ အငွေ့ပျံသောမီးဖိုများနှင့် လျှပ်စစ်အပူပေးကိရိယာများ၏ အပူဒဏ်သက်သာခြင်းပြဿနာကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။
သို့သော်လည်း လျှပ်စစ်သံလိုက် ကွိုင်များစွာ တည်ရှိနေသောကြောင့် လျှပ်စစ်သံလိုက် လျှပ်စီးကြောင်း အပူပေးခြင်း ဒရမ်ခြောက်စက် တစ်ဝိုက်တွင် ပြင်းထန်သော အလှည့်ကျ သံလိုက်စက်ကွင်း ရှိနေပြီး သမရိုးကျ သံလိုက်စက်ကွင်းသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ကို ထုတ်လွှတ်ပါသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းရှိ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဒရမ်အခြောက်ခံစက်အများအပြားသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် အလုပ်လုပ်သောအခါ၊ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ရောင်ခြည်သည် စက်ကိရိယာ၏အတွင်းပိုင်းတူရိယာများကို ပျက်စီးစေပြီး စက်ကိရိယာများ၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းကို ထိခိုက်စေပါသည်။ ထို့အပြင်၊ အော်ပရေတာများသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ရောင်ခြည်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ အလုပ်လုပ်ရန်လည်း အဆင်မပြေပေ။ ထို့ကြောင့် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဒရမ်ခြောက်စက်မှ ထုတ်ပေးသော လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်ကို လျှော့ချရန် လိုအပ်ပါသည်။
Rotary Drum အခြောက်ခံစက်အတွက် Induction Heating Schematic
1.Multi-Turn Helical External Induction Coil ဖြင့် Induction အပူ
Induction အပူပေးကွိုင်များသည် အခြောက်ခံထားသော ဒရမ်တစ်ဝိုက်တွင် ပတ်ထားသော လျှပ်ကာချည်တစ်ဝိုက်တွင် ဒဏ်ရာဖြစ်သည်။ Multi-turn helical အနာကွိုင်များနှင့် အခြောက်ခံထားသော ဒရမ်များကို တစ်ပြိုင်နက် လှည့်ပတ်သည်။ induction အပူပေးစနစ်သည် အခြောက်ခံထားသော ဒရမ်ကို လျင်မြန်ထိရောက်စွာ အပူပေးသည်။
2. Multi-Turn Helical Internal Induction Coil ဖြင့် Induction အပူပေးခြင်း
Induction အပူပေးကွိုင်များသည် အခြောက်ခံထားသော ဒရမ်အတွင်းတွင် ဒဏ်ရာရှိပြီး၊ Multi-turn helical အနာကွိုင်များနှင့် အခြောက်ခံဒရမ်များကို တစ်ပြိုင်နက် လှည့်ပတ်ထားသည်။ induction အပူပေးစနစ်သည် အခြောက်ခံထားသော ဒရမ်၏ အတွင်းအပူချိန်ကို အပူပေးသည်။
3. Stationary External Induction Coil ဖြင့် Induction အပူပေးခြင်း
Induction အပူပေးကွိုင်များသည် အခြောက်ခံထားသော ဒရမ်အထက် ပံ့ပိုးမှုတွင် ကွေးထားသော ပြင်ပကွိုင်များဖြစ်သည်။ အခြောက်ခံထားသော ဒရမ်သည် လှည့်နေသောအခါ၊ induction အပူပေးကွိုင်သည် တည်နေပါသည်။ induction အပူပေးစနစ်သည် အခြောက်ခံထားသော ဒရမ်ကို လျင်မြန်ထိရောက်စွာ အပူပေးသည်။
4. Stationary အတွင်းပိုင်း Induction Coil ဖြင့် Induction အပူပေးခြင်း
Induction အပူကွိုင်များ အခြောက်ခံသောဗုံ၏ အရွယ်အစားနှင့်အညီ ထုတ်လုပ်ပြီး ဒရမ်အတွင်း၌ ထည့်ထားသည်။ rotary drum dryer လည်ပတ်နေချိန်တွင်၊ induction heating coil သည် ငြိမ်နေပါသည်။ induction အပူပေးစနစ်သည် အခြောက်ခံထားသော ဒရမ်၏ အတွင်းအပူချိန်ကို အပူပေးသည်။
5. Stationary Multi-Turn Helical External Induction Coil ဖြင့် Induction အပူပေးခြင်း
Induction အပူပေးကွိုင်များသည် ပံ့ပိုးမှုတစ်ဝိုက်တွင် အနီးကပ်အနာရှိပြီး ကွိုင်ပံ့ပိုးမှုနှင့် အခြောက်ခံဒရမ်ကြားတွင် အကွာအဝေးအချို့ရှိသည်။ အခြောက်ခံထားသော ဒရမ်သည် လှည့်နေသောအခါ၊ induction အပူပေးကွိုင်သည် တည်နေပါသည်။ induction အပူပေးစနစ်သည် အခြောက်ခံထားသော ဒရမ်ကို လျင်မြန်ထိရောက်စွာ အပူပေးသည်။
electromagnetic induction အပူ
လျှပ်စစ်သံလိုက် အပူပေးခြင်းကို လျှပ်စစ်သံလိုက် လျှပ်ကူးပစ္စည်း အပူပေးခြင်းဟုလည်း ခေါ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ လျှပ်စစ်သံလိုက် အပူပေးခြင်း (နိုင်ငံခြား ဘာသာစကား- Electromagnetic heating အတိုကောက်: EH) နည်းပညာ။ လျှပ်စစ်သံလိုက် အပူပေးခြင်း၏ နိယာမမှာ အီလက်ထရွန်းနစ် ဆားကစ်ဘုတ်၏ အစိတ်အပိုင်းများမှတဆင့် သမအောင် ပြောင်းလဲနေသော သံလိုက်စက်ကွင်းကို ထုတ်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကွန်တိန်နာအောက်ခြေရှိ သတ္တုအပိုင်းတွင် လျှပ်စီးကြောင်းများ ဖြတ်တောက်ခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာ လျှပ်စီးကြောင်းများ) ကို ဖြတ်တောက်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရစ်ပတ်လျှပ်စီးကြောင်းသည် ကွန်တိန်နာ၏အောက်ခြေရှိ သယ်ဆောင်သူများအား အရှိန်ပြင်းပြင်းနှင့် မမှန်မကန်ရွေ့လျားစေပြီး သယ်ဆောင်သူနှင့် အက်တမ်များသည် အပူစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပွတ်တိုက်ကာ ပွတ်တိုက်ပေးသည်။ ပစ္စည်းကို အပူပေးခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိစေရန်။ သံကွန်တိန်နာသည် သူ့အလိုလို အပူထုတ်ပေးသောကြောင့်၊ အပူကူးပြောင်းမှုနှုန်းသည် အထူးမြင့်မားပြီး 95% အထိရှိသည်။ ၎င်းသည် တိုက်ရိုက်အပူပေးသည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ Induction cooker ၊ induction cooktop နှင့် electromagnetic heating rice cooker အားလုံးကို လျှပ်စစ်သံလိုက် အပူပေးနည်းပညာကို အသုံးပြုထားသည်။
ကြီးမားသော အပူဆုံးရှုံးမှု- ရှိပြီးသား လုပ်ငန်းများတွင် အထူးအသုံးပြုထားသည့် အပူပေးနည်းလမ်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဝါယာကြိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး စက်ဝိုင်း၏ အတွင်းနှင့် အပြင်ဘက်ခြမ်းများသည် အပူကို ထုတ်ပေးပါသည်။ လေထုထဲတွင် တိုက်ရိုက်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို ဆုံးရှုံးစေမည်ဖြစ်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် မြင့်တက်ခြင်း- အပူဆုံးရှုံးမှု အများအပြားကြောင့်၊ အထူးသဖြင့် နွေရာသီတွင် ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် မြင့်တက်လာပြီး ထုတ်လုပ်မှု ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် များစွာ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အချို့နေရာများတွင် အလုပ်လုပ်သော အပူချိန်သည် 45 ဒီဂရီထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။ ဒုတိယအညစ်အကြေး။
ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းတိုတိုနှင့် ကြီးမားသောထိန်းသိမ်းမှု- ခံနိုင်ရည်ရှိဝိုင်ယာကြိုးအသုံးပြုခြင်းကြောင့် လျှပ်စစ်အပူပြွန်၏အပူအပူချိန် 300 ဒီဂရီအထိ မြင့်မားသည်၊ အပူပြတ်တောက်မှုသည် ကြီးမားသည်၊ အပူချိန်ကိုတိကျစွာထိန်းချုပ်ရန်မလွယ်ကူသည့်အပြင် ခံနိုင်ရည်ရှိသောဝါယာကြိုးသည် မြင့်မားသော အပူချိန်ကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှု လွယ်ကူသည်။ အသုံးများသော လျှပ်စစ်အပူပေးကွိုင်၏ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းမှာ တစ်နှစ်ခွဲခန့်ရှိသောကြောင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုပမာဏမှာ အတော်လေးကြီးမားပါသည်။
လျှပ်စစ်သံလိုက် induction အပူထုတ်ကုန်များ၏အားသာချက်များ
နှစ်ရှည်ဝန်ဆောင်မှု: လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူပေးကွိုင်ကိုယ်တိုင်က အခြေခံအားဖြင့် အပူကို မထုတ်ပေးနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် တာရှည်ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရှိသည့်အပြင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အစားထိုးစရိတ်စကများ မရှိပါ။ အပူပေးသည့်အပိုင်းသည် အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ကေဘယ်လ်ဖွဲ့စည်းပုံကို လက်ခံထားပြီး ကေဘယ်လ်ကိုယ်တိုင်က အပူမထုတ်ပေးဘဲ အပူချိန် 500°C အထက်တွင် ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း 10 နှစ်အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မလိုအပ်ဘဲ အခြေခံအားဖြင့် နောက်ပိုင်းကာလများတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်စက မရှိပါ။
လုံခြုံစိတ်ချရသော စည်၏အပြင်ဘက်နံရံကို ကြိမ်နှုန်းမြင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် အပူပေးကာ အပူကို အပြည့်အဝအသုံးချပြီး အခြေခံအားဖြင့် ဆုံးရှုံးမှုမရှိပါ။ အပူသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတွင် စုပုံနေပြီး၊ လျှပ်စစ်သံလိုက် ကွိုင်၏ မျက်နှာပြင် အပူချိန်သည် အခန်းအပူချိန်ထက် အနည်းငယ် ပိုမြင့်နေသဖြင့် မြင့်မားသော အပူချိန်ကို အကာအကွယ်မပါဘဲ လုံခြုံစွာ ထိတွေ့နိုင်သောကြောင့် ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ထိတွေ့မှုဖြစ်သည်။
မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှု- အတွင်းအပူပေးသည့် အပူပေးနည်းလမ်းကို လက်ခံကျင့်သုံးပြီး အပူပေးသည့်ကိုယ်ထည်ရှိ မော်လီကျူးများသည် အပူထုတ်ပေးရန်အတွက် သံလိုက်စွမ်းအင်ကို တိုက်ရိုက်ထုတ်ပေးသည်။ ပူသောစတင်မှုသည် အလွန်မြန်သည်၊ နှင့် ခံနိုင်ရည်ရှိ ကွိုင်အပူပေးနည်းလမ်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ပျမ်းမျှအပူပေးချိန် 60% ကျော် တိုသွားပါသည်။ Resistance coil heating နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက လျှပ်စစ်ဓာတ်အား 30-70% ကို သက်သာစေပြီး ထုတ်လုပ်မှု ထိရောက်မှုကို များစွာ မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
တိကျသောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု ကွိုင်ကိုယ်တိုင်က အပူမထုတ်ပေးဘူး၊ အပူလွန်ကဲမှုက သေးငယ်တယ်၊ အပူဓာတ်နည်းတယ်၊ စည်ရဲ့ အတွင်းနဲ့ အပြင်နံရံတွေရဲ့ အပူချိန်က တသမတ်တည်း ဖြစ်နေတယ်၊ ​​အပူချိန် ထိန်းချုပ်မှုက အချိန်နဲ့တပြေးညီ တိကျတယ်၊ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး သိသိသာသာ တိုးတက်လာတယ်၊ နှင့် ထုတ်လုပ်မှု ထိရောက်မှု မြင့်မားသည်။
ကောင်းသောလျှပ်ကာ: လျှပ်စစ်သံလိုက် ကွိုင်များကို စိတ်ကြိုက် အထူးအပူချိန်မြင့် နှင့် ဗို့အားမြင့် အထူးကြိုးများဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး၊ ကောင်းမွန်သော လျှပ်ကာများဖြင့် ပြုလုပ်ထားကာ တိုင်ကီ၏ အပြင်ဘက်နံရံနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှုမရှိခြင်း၊ ယိုစိမ့်မှုမရှိခြင်း၊ တိုတောင်းသော လျှပ်စီးကြောင်းများ ချို့ယွင်းခြင်းနှင့် စိုးရိမ်စရာ မရှိပါ။
လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို မြှင့်တင်ပါ လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူပေးကိရိယာဖြင့် အသွင်ပြောင်းထားသော ဆေးထိုးပုံသွင်းစက်သည် အတွင်းပိုင်းအပူပေးနည်းကို လက်ခံသည်၊ အပူသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတွင် စုစည်းနေပြီး ပြင်ပအပူကို စွန့်ထုတ်ခြင်းမှာ မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းများ၏ မျက်နှာပြင်အပူချိန်ကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်က ထိမိသည့်အထိ မြှင့်တင်နိုင်ပြီး ခုခံကွိုင်ကို ပုံမှန်အပူချိန်သို့ အပူပေးသောအခါ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် 100°C အထက်မှ လျော့ကျသွားကာ ထုတ်လုပ်မှု၏ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို များစွာတိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ site သည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်သားများ၏ စိတ်အားထက်သန်မှုကို ထိရောက်စွာ တိုးမြှင့်ပေးပြီး နွေရာသီ စက်ရုံဧရိယာတွင် လေဝင်လေထွက်နှင့် အအေးပေးခြင်း ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချပေးသည်။ “လူကို ဦးတည်သည်” ဟူသော အယူအဆနှင့်အညီ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် စက်ရုံများနှင့် ရှေ့တန်းမှ ထုတ်လုပ်မှုဝန်ထမ်းများအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု၊ ဘေးကင်းပြီး သက်တောင့်သက်သာရှိသော ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်သည်။
စက်မှုလျှပ်စစ်သံလိုက်စွမ်းအင်ချွေတာမှုအသွင်ပြောင်းခြင်းကို ပလပ်စတစ်စက်အပူပေးခြင်း၊ သစ်သား၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ အစားအစာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ ဓာတုဗေဒစက်မှုလုပ်ငန်း၊ ပလပ်စတစ်ဆေးထိုးစက်၊ extruder၊ ဖလင်မှုတ်စက်၊ ဝါယာကြိုးဆွဲစက်၊ ပလပ်စတစ်ဖလင်၊ ပိုက်၊ ဝါယာကြိုးနှင့် အခြားစက်များ၊ အစားအသောက်ပြုပြင်ခြင်း၊ အထည်အလိပ်၊ ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ဆေးဆိုးခြင်း၊ သတ္တုဗေဒ၊ အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်း၊ စက်ယန္တရားများ၊ မျက်နှာပြင်အပူကုသခြင်းနှင့် ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ဘွိုင်လာများ၊ ရေဘွိုင်လာများနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ခံနိုင်ရည်ရှိအပူပေးခြင်းအပြင် လောင်စာပွင့်သော ရိုးရာစွမ်းအင်ကို အစားထိုးနိုင်ပါသည်။ .
အထည်အလိပ်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့် ဆေးဆိုးခြင်း- ကုန်ကြမ်းများအတွက် လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူပေးခြင်းကို အသုံးပြုခြင်းသည် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု၊ အပူအမြန်နှုန်းကို တိုးမြင့်စေပြီး အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု တိကျမှုကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။
အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်း- သံဘူးခွံများနှင့် အခြားပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးခြင်း စသည်တို့ကို တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။
ဘွိုင်လာလုပ်ငန်း- ၎င်း၏ မြန်ဆန်သော အပူအမြန်နှုန်းကို အသုံးချ၍ လျှပ်စစ်သံလိုက် ဘွိုင်လာသည် သမားရိုးကျ ဘွိုင်လာ၏ အလုံးစုံ အပူပေးနည်းလမ်းကို စွန့်လွှတ်နိုင်ပြီး ဘွိုင်လာ၏ ရေထွက်ပေါက်ကိုသာ အပူပေးခြင်းဖြင့် ရေစီးဆင်းမှုတွင် အပူကို ပြီးမြောက်စေရန်၊ အပူအမြန်နှုန်း၊ မြန်ဆန်ပြီး နေရာလွတ်လည်း သက်သာပါတယ်။
စက်ယန္တရားလုပ်ငန်း- ကြိမ်နှုန်းမြင့်လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူပေးခြင်းသည် သတ္တုများဖြင့် အပူပေးကုသခြင်းတွင် အသုံးချနိုင်ပြီး သမားရိုးကျကုသမှုနည်းလမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် သိသိသာသာတိုးတက်လာပါသည်။ ဖိအားမလုပ်ဆောင်မီ diathermy၊
လျှပ်စစ်သံလိုက်အပူပေးခြင်းနည်းပညာကို အသုံးချခြင်းသည် ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးတိုးတက်ရေး၊ ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရေးတို့အတွက်သာမက စက်ကိရိယာထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများ၏ နည်းပညာအဆင့်ကို မြှင့်တင်ရန်လည်း အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ၎င်းကို သမားရိုးကျ လုပ်ငန်းများတွင် ပိုမိုတွင်ကျယ်စွာ လက်ခံအသုံးပြုကြသည်။